UPavel Priluchny nomkakhe uAgata Mutseniets, iifoto zomtshato ze-Instagram, abantwana be-Priluchny
I-Biography yePavel Priluchny igcwele insalela ebalulekileyo, iintlekele, ukuthengwa kunye ... kunye neengcamango. Kodwa, njengowomabhayisikobho omnandi, lo mbhalo, obhalwe ngumntu ovela ngasentla - ophelileyo. U-Pavel Priluchny akazange abe ngudumo kuphela, kodwa wafumana ulonwabo lwentsapho kunye nomkakhe uAgatha Muceniets. Nangona kunjalo, kungekudala bekukho amahemuhemu ukuba uPavel Priluchny uqhawule umtshato. Ngaba kunokwenzeka ukuba ebomini bomdlali we-black band ubuya kwakhona?
UPavel Priluchny nomkakhe uAgata Mutsseine: ngaba baqhawule ngokwenene?
Badibene kwi-set of series "I-School Closed". IPavel Priluchny, sele esele ehamba emagxeni akhe emithwalo yemithwalo evela kwiindidi ezincinci kumabonwakude, ngeli xesha wayedlala enye yabalinganiswa abalulekileyo. UAgatha, waseLatvia enhle, wadlala uPawulos othandekayo. Ibali lomsaneli lihamba ngokugqithiseleyo ukusuka kwilaluhlu ukuya ebomini bokwenene. Kwaye uPaul Priluchny noAgata Mutseniets sele beyindoda nomfazi.
UPaul Priluchny noAgata Mutseniets bahlukana? - Ayiboni ngathi!
Enyanisweni, abeendaba bafunda kuphela ngomtshato emva kwe nyaniso. Kwesinye sodliwano-ndlebe, uPawulos wabuzwa ukuba kuyinyani ukuba yena noAgatha babeshadile ngokusemthethweni. Umdlali we-actor akazange aphike kwaye waphendula umbuzo weendaba kumbhali. Enyanisweni, ulwazi olubanzi malunga neenkwenkwezi zomtshato zolu chungechunge oluthi "Valiwe isikolo" cindezela kwaye alukwazanga ukufumana. Iifoto ezimbalwa kuphela ezivela kwimithwalo emitshatweni yomtshato yayisetyenziselwa ipaparazzi. Abafana bebesigxina imigqo yemitshato yomtshato. Umtshakazi nomyeni bakhetha abamnyama ngomtshato.
UPaul Priluchny noAgata Mutzenie: yonke into iqala nje
Kungekudala emva komtshato uPavel Priluchny noAgata Mutseniets baba ngabazali abonwabileyo. UTimoti nguye owokuqala ulindelwe kulutsha olutsha. Nangona ukuba ngexesha lokuzalwa komntwana wokuqala, uPawulos wayeneminyaka engama-25 kuphela ubudala, wathatha ngokunyanisekileyo uxanduva lwakhe lomzali. Umdlali we-actor waqonda ukuba ngoku - wayeyindlalifa eyinhloko kwintsapho kwaye wahamba kwaye wayichitha ubusuku kwi-set.
UPavel Priluchny kunye nomkakhe nendodana
Ukususela kwishedyuli exakekileyo kunye nezinguqu ezinkulu ebomini bakhe, okungazange kwenzeke ngokuza komntwana, uPavel waqala ukubonakalisa umsindo wakhe aze aphazamise izihlobo zakhe ngokuphindaphindiweyo. Umfazi womlingisi uAgatha Muceniets uyavuma ukuba indoda iya kumtshatyalaza ngaphezu kweyodwa kwaye ingabi namibini. Nantsi enye yebali echazwe ngumfazi kaPavel Priluchny.
"Kwinqanaba lomxholo othi" Ukufuna ", apho babedlala kunye, u-Priluchny wakwazi ukukhwelela kumsebenzisi:" Ukhangele emlonyeni wakhe! "-" Sitsho nje isiyatha! "Safika ekhaya - silwa. Bashaya izitya. UPasha wamemeza ukuba ngomso uza kufaka umtshato. Ndithula ixesha elide. Kodwa xa kuphekwe ngokupheleleyo, ndiya kuphendula ukuze kungabonakali kakhulu. Ilizwi ngelizwi - kwaye likhawuleza. Iikhopu kunye namacwecwe zihamba. Ngaloo xesha satshitshisa indawo yokuhlala eRiga, kwaze kwaba nomnyango. Ngentsasa elandelayo sasilandela imilenze kwaye siyilungisa. UPasha uxolo: unokwenza ntoni, ngokukhawuleza. Umntwana, ngelanga, akazange abone nantoni na, wayehlala kunye nonina. "
Kubonakala ukuba uPavel Priluchny unomona kakhulu. Wayekhwele umfazi kuye nabani na owayenomdla ongakhathali okanye owambulisa naye. Kwaye kwindibano kwelinye leeklabhu zentloko, wavutha kakhulu ngumbhali weendaba malunga nombuzo owawugqokelwe umfazi wakhe ukuba waphendula umntu ohluphekileyo ngendlela ephosakeleyo kwaye engenakuguqulwa. Kodwa ngelixa ubunzima obunzima bomdlali, ngethamsanqa, aluzange lukhokele ekuphumeni kokugqibela kulwalamano. Ukongezelela, ngoku kutshanje, ngo-Matshi 2016, kwintsapho ebambileyo ye-Priluchny-Mutsenie yaba ngumntu omnye omnye. UPawulos noAgatha babenentombi, eyayibizwa ngokungaqhelekanga kwaye yothando kakhulu - iMiya.
UPavel Priluchny kunye nomkakhe uAgata Mutseniets kunye nentombi engumntwana uMia
I-Pavel Priluchny: ubomi bomntu bomdlali we-Instagram
Itheyetha, i-cinema, kwaye, ngokwenene, intsapho-konke oku kufumaneka kwi-Instagram ka-Pavel Priluchny. I-actor, ngokungafani nezinye iinkwenkwezi, ulayishe ngesibindi imifanekiso yomfazi wakhe othandekayo nabantwana kwiphepha lakhe, ukwabelana ngezona nkcukacha kakhulu zobomi bakhe kunye nabancedisi.
UPavel Priluchny kunye nomfazi kunye nabantwana (isithombe esivela kwi-Actor Actor)
IPavel naye uthanda "umntwana wakhe wesithathu" - umgcini wase-Staffordshire ogama linguValli. Isithombeni sakhe sinokufumaneka rhoqo kwi-Instagram ye-actor. Kwaye, kwii-angles ezahlukeneyo ...
Inja eyintandokazi yentsapho yase-Prilouchnye-Mutseniyetse-Staff Valley
Kodwa umdlali onqanda ukuthatha iifoto kunye nabantu abangaziwayo. Ngaphandle koogxa be-theater. Yonke into yokuba ibhinqa eliphambili ebomini, kwaye kwi-Instagram ye-Instagram yasePavel Priluchnogo isengumfazi wakhe othandekayo ... kwaye ngoku ke intombi kaMia.
IPavel Priluchny: yintoni ubude, ubunzima, iminyaka?
Kwi-biography yePavel Priluchny kubonakala ukuba umdlali wecala wazalwa ngoNovemba 5, 1987 kwisixeko saseShymkent eKazakhstan. Ewe, kungekudala intsapho kaPriluchny yaphoqeleka ukuba ishiye indlu ize idlulele kwingingqi yaseNovosibirsk, edolophini yaseBerdsk. Kukho umntwana omncinci oneminyaka emine ubudala, uPaul oneminyaka engama-4 ubudala, wagqiba ekubeni anikezele kwicandelo lebhokisi kunye nokubhaliswa ngokufanayo ... i-classic choreography. Kodwa oku kuchazwa lula. Uyise kaPavel wayengumxhasi weengcali, kwaye umama wayifundisa imibhobho. Kwixesha elizayo, njengoko umlingisi ngokwakhe evuma, zombini uncedo kuye. Nangona le nkwenkwe ayizange ifunde izifundo zokufunda ngokukhawuleza njengebhokisi.
UPavel Priluchny ebuntwaneni bakhe
UBawo wafa kusasa, kwaye uPavel, owayeneminyaka eyi-14 ngelo xesha, kwafuneka akhule ngokukhawuleza. Lo mfana wabonisa ezo zimpawu ezamnceda ukuba ahambe eMoscow, angene kuqala eMoscow Art Theatre School-Studio, aze afike kwiindawo ezizimeleyo zeGITIS. Ngeli xesha eliqaqambileyo nelingenasiphako ebomini nawuphi na umfundi, uPavel Priluchny uyawa thandana ... kunye nomdlali we-Hollywood u-Nikki Reed, i-vampire Rosalie kwi-movie "iTwilight".
UPavel Priluchny noNikki Reed: uthando lwabo lwalukhanyayo, kodwa ludlulileyo
Inkwenkwezi yefilimu yaseHollywood yinde kwaye iqhubeka ifuna umntu waseRussia. Ndaya kuyo yonke imisebenzi yakhe, ndathumela imoto kunye nomqhubi womntu owaqhuba loo nto kwihotele yaseBaltschug, apho uNikki Reed wayehlala khona eMoscow. Udumo lwaseHollywood waze wenza tatto negama lomthandi waseRussia ... Kodwa kungekudala i-novel yamazwe ephazamisayo yaphela. Umdlali we-actress wagijima ngaphesheya kwelanga, kwaye u-Priklukny kunye noNikki Reed beza ku-"no."
UPaul Priluchny noNikki Reed: uthando lwabo aluzange lube nesithsaba sokuphela
Kodwa uPawulos wayengenaso ixesha lokubandezeleka aze amlilele uthando lwakhe lwe-transatlantic. Waya kusebenza kunye nentloko kwaye kungekudala waba ngumnye wabadlali abancinci abasemncinci baseRussia. Umxholo othi "Isikolo esivaliweyo", "Mkhulu", "Hamba!", "Iimidlalo ze-Gamers" "Izingane ezingaphantsi kwe-16 ...", "Emdlalweni" ... Akukho nxaxheba encinci ekuthandeni okunjalo kwamaziko aseburhulumenteni base-Priluchnoy baseRussia, ngumdlalo wezemidlalo. Ukuphakama kukaPawulos ngu-180 cm, ubunzima - 75 kg. Namhlanje iPavel yinkwenkwezi yangempela. Unomkhosi onamandla-amawaka wabalandeli, umculi uyamenywa kwimiboniso ye-TV enomlinganiselo. Enye yeembonakalo ezibonakalayo zakutshanje zenkwenkwezi yechungechunge "Inkulu" yinkqubo ye-Ivan Urgant "Ngobusuku ngokukhawuleza".
UPavel Priluchny, umfazi kunye nabantwana bakhe: isithombe esivela emtshatweni kunye nakwiziko lomntu
UPavel Priluchny nomkakhe uAgata Mutseniets baye behlangene iminyaka emininzi. Ngeli xesha baphumelela ukumisa ngokusemthethweni ubudlelwane babo baze babele abantwana abathandekayo, unyana kaTimoti nentombi uMia.
Umtshato kaPavel Priluchny no-Agatha Muceniece
Intsapho eyintandokazi yomdlali, njengokuba yena ngokwakhe uyavuma, ngokuqhelekileyo uya kuye ukudubula. Kuphela intombi encinci ngelixa kuyimfuneko ukushiya izindlu kukhulukazi kunye nomongikazi. Umfazi we-actor - kwixesha elidlulileyo imodeli yamazwe ngamazwe, uyavuma ukuba akazange avande malunga nomdlali wePavel Priluchny de iindawo zabo zidibanisa kwi-series ye-series "School Closed".
"Ndiyakhumbula kakhulu ukuba ndabona njani kuqala u-Priluchny. Mna, umfundi wesithathu weVGIK, waya kwifa laseSerednikovo, apho babetha khona iziqendu zendalo. Ndiyifumane imoto, eyathunyelwa mna kunye nomculi uAndrey Neginsky. "Kwakhona kufuneka sifumane i-Priluki, uhambahamba apha," kutsho umqhubi. "O, uPasha yinkwenkwezi yethu," uAndrei wamemeza ngentshiseko. "Ngoku uya kumbona!" "Ngaba udlala umdlali wam?" "Ewe ... ndiyakhumbula ukuba sasijikeleza kangakanani emotweni, umqhubi wayebiza iPasha efonini - wayengenakuqonda apho wayemi khona. Emva koko ndambona ngefasitela: kwengubo emnyama emnyama, eneendlebe ezimnyama endaweni yengxowa. Andizange ndifumane ixesha lokungena emotweni, wabuyela kum: - Mamela, unayo iqabane? - Wow umbuzo! Kamva ndafunda ukuba uPasha uyathanda ukufaka indoda ekufeni. Kwaye, ngokudideka, kodwa waphendula ngokunyanisekileyo: - Ewe. Kukho. "Hayi, ungathethi kum!" Watsho. Wabuya. "
Ngelo xesha, u-Agata wayenebudlelwane obukhulu kunye nomculi weBallet Dima Bilan, uDanem Alekseev udansa. Abantu abaselula babeceba ikusasa kwaye bafuna ukutshata ...
Agata Mutsenie noArtem Alekseev
Kodwa uPavel wangenelela. Kamva, wavuma ukuba ekuqaleni wayemthanda nomlingane wakhe kwisethi. Kwaye emva kwesiganeko sokubanga omnye-uAgatha waqonda ukuba uPawulos uyindoda yamaphupha akhe. Enyanisweni, kwiskripthi seeleyibhile abalobi bayo kufuneka benze utshintsho kwaye "babulale" i heroine ye-Agatha. Le ntombazana yayibhalwe ikhulelwe, kwaye isisu saqala ukubonakala ...
UPaul Priluchny noAgata Mutsenie bekulindele ummangaliso
Umntwana wokuqala, inkwenkwe, uTimoti, wenza utshintsho olukhulu kwiinkalo zabatshatileyo. UPavel Priluchny uyavuma ngokunyanisekileyo ukuba ngokuzalwa kwendodana yakhe, ukuqala ukuthanda kwakhe kuye kwavela kwimvelaphi. Nangona umdlali wenza konke okusemandleni ukwenza ukuba iqabane lizwe lithande kwaye lifunwa.
"Ngoku ayiyiyo isidlo sangokuhlwa kwesidlo se-candlelit. Inkathazo eninzi, nangona iyamnandi, enxulumene nabantwana. Kodwa ndizama ukuphazamisa uAgatha ngandlela-thile. Ngokuqhelekileyo ndinika iintyatyambo. Nangona i-trifle, kodwa ilungile. Ukuba ndihamba kwindawo ethile, kufuneka ndizise izipho. "
Esi sibini sagqiba ekubeni sihlale nomntwana omnye, nangona ngekamva abazange baphumelele ukuba bazalise enye intsapho kunye nendodana okanye intombi. Kodwa ukukhulelwa kwesibili kwakungacwangciswanga, njengowokuqala. Yaye nangona bendimangalisa ukuba abantu abatshatileyo babengakulungele, kodwa bavuya ngokukhawulelana nale ndaba. Ngoko kwintsapho kwakukho iMia encinane.
I-Pavel Priluchny kunye nabantwana (ifoto esuka ku-Instagram)
Enyanisweni, kwanelo hlobo lentsapho yintsapho njengoko uPawulos ebona kunzima ukumelana nezilingo ezihambelana ngqo nomsebenzi wakhe. Yaye yintoni umntu oqhelekileyo onokumelana nalobuhle njengoVera Brezhneva? Umdlali kunye nomculi waba ngumlingani kaPawulos kwi-series ye "series 2". Isithombeni sakhe sokuqala ekufayeleni, kunye noPawulos, kubangele ukucatshulwa nokuhleka. Kwaye lo utyikityo ...
UPavel Priluchny noVera Brezhneva kwisethi yokuqhutyelwa kwecandelo elithi "Major"
"Usondele. Ngoku unokusebenza ngokuthula. Ubumnandi obumnandi, intsebenziswano enomdla ... "
UPawulos, naye akazange ahlale e-tyala aze aphendule uVera ngenhlonipho:
"Akukhona nje uMculi omkhulu, kodwa nomntu ontle, kwaye oku kubalulekile - musa ukuphazamisa ukuthandwa kwakho!
Kodwa uPawulos wabonisa isibindi ngokumelana nale mvavanyo. Kwaye simele sihlawule umfazi kaPavel Priluchny, ngubani, njengabo bonke abafazi abafanelekileyo, uzama ukuzilumko nokuqonda. Akakhwele umyeni wakhe, kungekhona kuphela oogxa abathandekayo kwi-set (nangona, iveli yabo yaqala ngokucacileyo kwi-set!), Kodwa nakwaPawulos.
"Andiboni nantoni na emona. Ewe, sadibana ne-premiere ye-film actress uRenat Piotrowski, ndiyazi ukuba balala noPasha. Intombazana entle. Sayeka saxoxa naye. U-Renata, onjengawe, ukusuka eBaltics, kwaye nathi sinezibini zomdlalo-iiprojekthi ezintsha, iifilimu, kukho into ekuxubusha ngayo. Kutheni ndimele ndimphathe kakubi, yintoni eyadlulayo idibeneyo apha? Kutheni ngoku, ukuba uyabiza, ndiya kubhonga efonini: "Ulibale inombolo yethu ngonaphakade!"? I sidenge!
UTatyana Navka noDmitry Peskov baya kutshata eSochi
Ubomi bomntu, indoda kunye nabantwana bomculi uPelagia: yinyani, kwaye yintoni inkolelo?
I-Talente ibe ngumfazi: ubuchule kunye nobomi bomntu ka-Alla Sigalova
IVF okanye unina Ividiyo ekhulelwe ngu-Anna Kournikova kwiinyanga ezi-5 iphakamisa imibuzo
Indlela efanelekileyo yokunyusa ubomi
Ikhukhi kwi-kottage cheese
Indlela yokukrazula iimvakalelo zetyala
Isobho kunye neentensi kunye namazambane
Abahlobo okanye abantu abalungileyo
Izifo zentsholongwane yabantwana. Ukuthintela unyango
I-toxicosis emva kokukhulelwa, kunokuhamba kunye
Ngaba kukufanele ukuba uqhelane nentombazana yokuqala?
Panno nge paillettes
I-Rye buns kunye no-anyanisi